Sidee Loogu Xulaa Filterka Cirka Si Sax Ah? -Shacabka News-Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Sidee Loogu Xulaa Filterka Si Sax Ah?
Waqtiga: 2019-04-11 Hits: 59
Sidee si sax ah loogu xushaa Filterka Hawada?
Sida loo doorto Sifeeyaha Hawada si sax ah waxay u baahan tahay qaababka xulashada soo socota.
1. Hubi nadaafadda hawada (CADR)
Nadaafadda hawadu waa tilmaame muhiim ah oo ku saabsan tayada Sifeeyaha Hawada. Waxay loola jeedaa inta mitir cubic ee hawo nadiif ah la dhoofin karo saacadiiba. Marka Filterka Hawada la xusho, ayaa sareysa tilmaanta hawada nadiifka ah, waxay sare u qaadeysaa hufnaanta sifaynta Filter-hawleedkan. Dabcan, hadba inta qiimaha nadiifka ahi ka sarreeyo, ayaa ka sii wanaagsan. Tani waxay badanaa ku saleysan tahay jawiga dhabta ah ee shaqada ee shirkadda. Haddii nadaafadda hawadu aad u sarreyso, in kasta oo ay muujineyso in saameynta sifeynta ay aad u wanaagsan tahay, ma caawinayso shaqada dhabta ah, laakiin waxay kordhineysaa qiimaha shirkadda.
Ii. Tirada hawo qaadashada
Heerarka caalamiga ah, shuruudaha Shaandhaynta Hawada waa in shan saac isbeddel lagu sameeyaa saacaddiiba. Tijaabada waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhejiyo cadka / dabaylaha, waana fududahay in la ogaado tirada isbadalada hawada iyo xaddiga hawo ee ka soo baxda hawada.
3. Meesha ay khusayso
Taas oo aan lahayn heerar adag, waxay dhihi kartaa oo keliya haddii aqoon-isweydaarsigu weyn yahay, sidaa darteed waxaa wanaagsan in la doorto Aaladda Aaladda Hawada sareysa, si loo damaanad qaado waxtarka nadiifka ah, loo ilaaliyo qolka nadiifka ah ee nadiifka ah. Dabcan, way ku adkaan kartaa qaar ka mid ah shaqaalaha aan xirfadlayaasha ahayn inay xukumaan, laakiin ogaadaan sida loo doorto. Waxaa ugufiican in lala tashado xirfadlaha kahor iibsiga.
Kuwani waa qaar ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka feejignaato markaad dooraneyso Sifeeyaha Hawada. Haddii aad rabto inaad doorato Filinka Hawada ee saxda ah, waxaad u baahan tahay inaad ka xukuntid xogta, si aadan saameyn ugu yeelan wax soo saarkaaga.
Maaddaama wasakheynta hawadu ay sii xumaanayso, Shaandheeyaha Hawada sare ee dugsiyada sare ayaa aad ugu sii badanaya dhinaca warshadaha. Si kastaba ha noqotee, haddii rakibistu aysan ahayn mid macquul ah, waxay yareyn kartaa waxtarka shaandhaynta ee waxsoosaarayaasha Hawada sare ee dugsiga sare. Waa kuwan tixgelinta qaar ka mid ah rakibaadda:
1, marka la rakibayo Filtarka Hawada, waa inuu ahaadaa mid si adag u waafaqsan tilmaamaha, falaarta ku taal santuuqa banaanka shaandhada waxay u taagan tahay jihada hawada, marka la rakibayo, hubi inay fallaadhu la jaanqaadayso jihada saxda ah ee hawada, haddii aad u baahan tahay rakibaadda toosan, jihada warqadda shaandhada ee gudaha waa inay toos u taagnaataa dhulka. Markii la rakibayo, waa in laga sameeyaa dusha mesh mesh gadaashiisa gadaashiisa, iyo bacda Filter-ka Hawada waa inuu ka dhigaa dhererka bacda shaandhada ee dhulka u siman.
2. Haddii Sifeeyaha Hawada loo baahan yahay in lagu rakibo qolka nadiifka ah, iskuday inaadan isticmaalin alwaaxda alwaaxda ah si aad uga hortagto bakteeriyada inay taranto, taasoo saamayneysa tayada hawada gudaha. Waxaa ugufiican in la isticmaalo shaandhada birta banaanka hore ee birta, oo waxay leedahay caabbinta daxalka oo wanaagsan. Marka la raacayo rakibida, waxaa muhiim ah in fiiro gaar ah loo yeesho shaabadaynta udhaxeysa miiraha hawada iyo xayndaabka, waana in la hubiyaa in sifeynta qalabka ay si adag u socoto oo aysan daadin. Haddii heerkulka deegaanku sarreeyo, isticmaal Sifeeyaha Hawo-kulul.
3. Kahor intaadan rakibin Shaandhada Hawada, ha furin bacda wax ku baakadeysa ama filimka wax ku ridaya, si aad isaga ilaaliso inaad qalabka waxyeello u geysato, kuna kaydi jihada lagu tilmaamay sanduuqa wax lagu rido. Inta lagu gudajiro maaraynta, Filterka Hawada wuxuu ku dhaawici karaa iftiinka iyo iftiinka, isaga oo iska ilaalinaya gariirka iyo isku dhaca. Shaandheeyeyaasha waxtarka leh, jihada tuubadu waa inay u socotaa jihada saxda ah; Intaas waxaa sii dheer, miirayaasha guntin jiingado waa inay ku xirnaadaan dhulka markii toos loo rakibo.
HORESidee loo doortaa mashiinka saxda ah ee hepa filterka hawada, mashiinka bacda filterka jeebka?
NEXTTaxadarka Ku Xidhitaanka Filterka Hawada